» वार-पारतर्फ नेकपा विवाद, कस्तो भइरहेको छ छलफल ?
वार-पारतर्फ नेकपा विवाद, कस्तो भइरहेको छ छलफल ?
३ मंसिर २०७७, बुधबार ०७:५३
‘सहमतिमा मात्र बैठक तय गरौं, भोलि (मंसिर ३) का लागि स्थगित गरौं,’ पौडेलले दाहाललाई टेलिफोनमा भने। ओली निकट नेता, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले केही दिन बैठक रोकेर दुई अध्यक्षले छलफल गर्दै सहमतिमा पुग्नुको विकल्प नभएको बताए।गत स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
‘बालुवाटारमा हामी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दै गर्दा त्यहींबाट महासचिवले अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिउँसो साढे ३ बजेतिर टेलिफोन गर्नुभएको थियो। दुई अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर महासचिवले बैठक राख्ने र स्थगित गर्ने हो भन्दै उहाँले भोलि (३ मंसिर) का लागि स्थगित गरौं, केही दिन समय लिएर सहमति जुटाऔं। यसो गरौं भन्नुभयो,’ नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उता (दाहाल)बाट ठीक छ, सल्लाह गरेर म खबर गरौंला भन्नुभएको छ।’ दाहाल पक्षले सहमतिमा बैठक स्थगित गर्नेतिर नगएमा महासचिव पौडेलले बुधबार बिहान आफ्नो तर्फबाट सचिवालय बैठक स्थगित गरेको सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा ओली पक्ष छ।
‘अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने, सम्बन्धित कमिटीको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने विषय अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा उल्लेख भएको छ। त्यही टेकेर महासचिवले बुधबार बिहान दाहाल नेपाल पक्ष सहमतिमा नआए बैठक स्थगितको सूचना पठाउनुहुन्छ,’ ओली निकटका एक स्थायी समिति सदस्यले भने। दाहाल–नेपाल पक्षले भने मंगलबार अबेरसम्म बैठक रोक्ने विषयमा कुनै धारणा बनाइसकेको छैन।
ओली पक्षीय नेताहरू बालुवाटारमा छलफल गर्दै गर्दा दाहालले पनि आफ्नो निवासमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त छलफलमा पार्टी बैठक नरोक्ने, ओली पक्ष सहभागी नभए पनि बैठक राखेर स्थायी समिति बैठकको मिति तोकेर जाने तय गरियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठक नरोकिने बताए। ‘उहाँहरूका कुरा बैठकमै राख्नुपर्छ। बैठक रोकिंँदैन। सबै कुरा बैठकमा राखेर त्यहीँबाट समस्या समाधानको खोजी गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
नेकपामा दुई पक्ष आआफ्नै अडानमा रहने र बैठक राख्ने र नराख्नेमै नेताहरू घम्साघम्सी गरेमा पार्टी संकटमा पर्नेछ। सम्भाव्य जोखिम रोक्न पनि उपायको खोजी पहिले गर्नुपर्नेमा कतिपय नेताहरूको तर्क देखिन्छ। खुमलटारमा उपाध्यक्ष गौतम र वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेट गरेपछि साँझ दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी एकता बचाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।
राष्ट्रपति भण्डारीले यसबीच उपाध्यक्ष गौतम, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कात्तिक २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। ओली पक्षीय नेता नेम्बाङले आफूले दुवै अध्यक्षलाई केही समय लिएर छलफल गरेर सहमतिमा बैठक बोलाएर जान सुझाव दिएको बताए।
‘खुमलटारमा अध्यक्षलाई पनि खबर पठाएको थिएँ, उहाँले तपार्इंलाई भेट्न बोलाउँछु हैं भनेर खबर पठाउनु भएको छ। तर यति हुँदाहँुदै पनि साथीभाइमार्फत खबर पठाएको छु। दुई अध्यक्षले छलफल गर्दै सहमतिमा पुग्नुको विकल्प छैन। विगत जुन स्थायी समितिको निर्णय छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ।
पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा अहिले भोलि (मंसिर ३) बस्न लागेको सचिवालय बैठक अगाडि तपाईंहरूको आवश्यक तयारी पुगेको जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण केही समय लिनुहोस्। केही समय बैठक रोक्नुहोस्। तपाईंहरूबीच आवश्यक तयारी गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला। त्यसो गर्नु राम्रो होला भन्ने सन्देश दुवै अध्यक्षकहाँ पु¥याउने काम गरेको छु’ नेम्बाङले भने।
प्रधानमन्त्रीले भने आफू पार्टी एकताको पक्षमा ढृढ रहेको र यसलाई यताउती हुन नदिने आफूहरूसँग बताएको पनि नेम्बाङले सुनाए। यसबीच, ओलीले कात्तिक ३० मा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष गौतमलाई महासचिव विष्णु पौडेललाई सँगै राखेर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। ओलीले दुवै नेतासँग दाहालले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव दस्तावेज नभई आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा गरिएको प्रहार भएकाले त्यसलाई आफूले जवाफ दिएर नजाने बताएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।